प्रतिभाशाली प्रेन्सा रेग्मी | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार प्रतिभाशाली प्रेन्सा रेग्मी
प्रतिभाशाली प्रेन्सा रेग्मी
२०७७, ७ श्रावण बुधबार ११:०६
प्रतिभाशाली पोखराकी प्रेन्सा, “चौतारोमा बसी मास्क बेचेर बचत रकम कापीकलम किन्न नसक्नेहरुलाई उनले सहयोग गर्छिन्” उमेरले सानी तर प्रतिभा अनेक ।
पोखराकी प्रेन्सा रेग्मी उमेरले मात्र ८ वर्षकी भइन् । कक्षा ३ पढ्छिन् । उनको बहुप्रतिभा लकडाउनको बेलामा निकै खुलेर आयो । विद्यालय जानबाट वञ्चित उनीजस्तै बालबालिका प्रेन्साको प्रस्तुति एवं सहयोगी भावबाट प्रेरित बन्ने गरेका छन् ।
तपाईँ पोखरा महानगरपालिका वडा १७, बिरौटा पुग्नुभयो भने प्रेन्सालाई मास्क बेचिरहेको भेट्नुहन्छ । उनले केही सातायता आफ्नो घर नजिकै चौतारोमा बसेर मास्क बेच्ने गरेकी हुन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका सर्वसाधारणलाई मास्क बेचेर बचेको पैसा उनले सामाजिक सेवामा लगाउँछिन्।
सरकारले पनि यतिखेर मास्कबिना घरबाहिर ननिस्कनू भन्ने उर्दि जारी गरेपछि मास्क कोरोनाबाट बच्न अनिवार्य साधन बनेको छ । आयआर्जन कमजोर रहेका परिवारका आफूजस्तै उमेरका साना भाइबहिनीको लागि उनले बचत रकम सहयोग गर्ने गरेको बताइन् । यी सानी बालिकाले भनिन्, ‘कोरोनाले धेरैजनालाई दुःख भएको छ । कति धेरैले आफूले चाहेको बेलामा खान पाउनुभएको छैन ।
कापीकलम किताब किन्न पाउनुभएको छैन । उहाँहरुलाई हेल्पको लागि मैले यस्तो काम गरेकी हुँ ।’ दह्रिलो आत्मविश्वास बोकेकी उनी अगाडि भनिन्, ‘काम गरेर खान के को लाज ? चोर्नु ढाट्नु त भएन । सबैजनालाई सानोठूलो नभनी काम गरे देशको उन्नति हुन्छ ।’ उनका बाबुआमा बिरौटामै स्टेशनरी चलाउँछन् । अघिल्लो वर्षदेखि संचालन सुरु सो व्यवसायको नाम ‘नमस्ते पोखरा स्टेशनरी’ हो । उनको बाबुको नाम रामकृष्ण रेग्मी र आमाको नाम जयन्ती रेग्मी हो ।
प्रेन्साको एक दाइ छन् । उनको नाम प्रोगेस हो । घरनजिकैको शिशु निकेतन स्कुलमा कक्षा ३ की विद्यार्थी प्रेन्सा पढाइमा पनि अब्बल छन् । सधैँ टप टेनभित्रै पर्छिन् । अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न भनेपछि हुरुक्कै हुने उनी विशेषगरी अभिनय गर्न रुचाउने गरेको विद्यालय शिक्षकको अनुभव छ ।
विद्यालयको प्राथमिक तहअन्तर्गत संयोजक खीमकुमारी शर्माले गएको केही महिनाअघि मात्र उनको क्षमताबारे भेउ पाइन् । कोरोना महामारी आउनुअघिको कुरा हो, विद्यालयमा पढाइका अलावा नियमितरुपमा अतिरिक्त क्रियाकलाप हुँदै थियो । कक्षाका करिब १ सय २० जना विद्यार्थीलाई आफूले जानेको क्रियाकलाप गर्न अह्राइयो । तीमध्ये कतिपयले नाचे, केहीले गीत गाए, कतिपयले पेन्टिङ गरे भने केहीले भाषण कला प्रस्तुत गरे । तर अभिनय रोजेकी प्रेन्साले समसामयिक विषयमा गरेको क्यारिकेचरले सबैजनाको ध्यान खिच्यो।
त्यतिबेला सबैजनाले उनको कलाको जादु देख्ने मौका पाए । त्यसको अझ प्रष्फुटन हुने अवसर पायो, लकडाउनको फुर्सदिलो समयमा । कोरोना भाइरस महामारीका न्यूनीकरणका लागि जारी लडडाउनले घरभित्रै खुम्चिनुपर्दा समय पर्याप्त हुने ।
प्रेन्साले पनि दाजु र बुवाको सहयोगमा मोवाइलमा विभिन्न भिडियो खिचेर फेसबुकमा पोष्ट्याउन थालिन् । यूट्वमा अपलोड भए भने टिकटक पनि बन्दै गए । मुलुकको पछिल्लो राजनीति, कोरोना भाइरस महामारी, नेपाल–भारत सीमा विवाद, वैदेशिक रोजगारी, गाउँघरमा बाँझो बन्दै गएको खेतबारी, दुःखी गरिब र मजदूरको पीडा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भिडियो बन्दै गए ।
सरोकारवालालाई समेत घच्घच्याउनेखालका उनको भिडियो आफन्त, साथी, विद्यालय गुरुवर्ग, इष्टमित्र तथा छरछिमेकले धमाधम सेयर गर्न थाले । मानौं उनी भाइरल भइन् । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका स्थायी घर भएको रेग्मी परिवार छोरीको प्रतिभा देखेर दंग छ । बाबु रामकृष्णले युट्ुवमा ‘प्रेन्सु अफिसियल’ नामक च्यानल खोलिदिएका छन् ।
लामोखालको अनुच्छेद पनि प्रष्ट बोलीमा नहेरीकन भन्न सक्ने उनको विलक्षण क्षमता छ । लकडाउनकै बेलामा कक्षा २ उत्तीर्ण भइ ३ पुगेकी उनले आफ्नो कक्षाका विषय भिडियोमार्फत अरु साथीलाई पढाउने गरेकी छन् । अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली लगायतका मुख्यमुख्य विषय उनले एकचरण पढेर भ्याइसकेको बताइन् । सबै उनलाई कण्ठस्थ आउने गरेको उनका पिता रामकृष्णको दाबी गरे ।
आमा जयन्ती. पनि सानैदेखि प्रेन्साको स्वभावबारे पूरापूर जानकार छन् । भनिन्, ‘छोरीको आफूले मात्र नखाने अरुलाई पनि केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने स्वभाव छ । निकै ज्ञानी र बुझक्की छ । दोस्रो सन्तानको रुपमा यति राम्री छोरी पाएकोमा निकै खुसी छु ।’ मास्क बेचेपछि बचत भएको रकमबाट प्रेन्साले सानो उमेरका १० जना बढीलाई पढाइको लागि आवश्यक स्टेशनरी सामग्री सहयोग गरिसकेकी छन् ।
साथै, उनले केही दिनअघि प्रहरीलाई समेत सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने गरी मास्क हस्तान्तरण गरिन् । घरबाहिर निस्कदा बिनामास्क हिड्नेलाई २ दिनयता पोखरामा प्रहरीले समातेर जरिवाना लिन थालेपछि कारबाहीमा परेकाहरुलाई वितरणका लागि प्रेन्साले मास्क दिएको बताइन् । उनले स्टेशनरीमा प्रेन्सा स्टलसमेत बनाएकी छन् ।
कसैलाई कापी किन्नेसम्म पैसा नभए, फ्रिमै लैजान सकिने सूचना समेत टाँसेकी छन् । सानैदेखि अरुलाई सहयोग गर्न रुचाउने यी प्रतिभाशाली प्रेन्साजस्तै धेरै बालबालिकाको प्रतिभाको कदर हुनु आवश्यक छ । भविष्यमा के बन्ने भन्ने जिज्ञासामा उनको सटिक जवाफ छ, ‘देशको लागि जे आवश्यक पर्छ, त्यही बन्छु ।’
Previous articleशिक्षक महासंघद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा दुईलाख सहयोग
Next articleलायन्स क्लव बेनीको रक्तदान, ३५ पिन्ट रगत सङ्कलन